Myanmar:Mpanao fihetsiketsehana sivy no voasambotra nandritra ny fidinana an-dalambe · Global Voices teny Malagasy
Myanmar:Mpanao fihetsiketsehana sivy no voasambotra nandritra ny fidinana an-dalambe
Voadika ny 16 Janoary 2009 21:17 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Tsy taombaovao nahafaly ireo sivy mpikambana ao amin’ny National League for Democracy izay voasambotra teo akaikin’ny Parlemanta izay natsangana ao Rangoon, tany Myanmar tamin’ny talata (30 desambra) lasa teo raha nitaky ny hanafahana ny olomangan'ny demokrasia Aung Sam Suu Kyi ry zareo.
Manazava “ny heloka bevava”nataon’ireo mpanao fehetsiketsehana I Ashina Mettacara:
“Araka ny loharano azo dia lehilahy valo sy vehivavy iray no natosiky ny mpitandro ny filaminana izay tsy nanao fanamiana hiditra tao anaty fiara lehibe, tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro, raha nadeha teny anoloan’ny tranoben’ny parlemanta ry zareo nitondra sora-baventy hoe “avotsory I Aung San Auu Kyi”
Sary avy tamin’ny blaogin’I Ashin Mettacara
Fantatry Irrawaddy ireo sivy nahasahy nihetsiketsika ireo: Tun Tun Win, Tun Tun Linn, Pyae Pyae Aung, Win Myint Maung, Min Thein, Kaung Htet Hlaing, Phyo Wai sy Yeni Soe ary Htet Htet Oo Wai.
Fa maninona no nidina teny an-dalambe izy ireo? Nitsapa ny “tahalan'ny demokrasia” any Myanmar ve? Angamba natosiky ny fitiavan-tanindrazana izy ireo hankalaza ny faha 61 ny andro nahazoan’ny Burma ny fahaleovantenany.
Ny fikambanana mpikarakara ny gadra politika (Burma) no namoaka fanambarana momba ny fizotran’ity toe-draharaha ity.
“Nanatanteraka ny lanonana mba hanamarihana ny faha 61 ny fahaleovantena ny Burma tany amin’ny foibe misy azy ireo androany ny antoko National League for Democracy. Tao aorian’ny lanonana dia nisy tanora 9 mpikambana ao amin’ny NLD nandeha niainga avy teo amin’ny foibe misy azy ireo ary nihazo ny tananan'i Sanchaung, izay manodidina an'i Rangoon mitondra sary sy takelaka ahitana ny endriky Daw Aung San Suu Kyi. Nitaky ny mba hamotsorana ireo gadra politika ry zareo sy ny hanatanterahana ny fampihavanam-pirenena,”
“Raha vao tonga teo amin’ny kianja malalaka natokana any Sanchaung ry zareo dia voasambotry ny mpikambana ao amin’ny Arr Shin (Tafi-bahoakan'ny mpitondra) nanao herisetra niaraka tamin’ny daroka maherivaika teo ampisamborana. Ary tsy fantatra hatramin’izao no misy azy ireo.”
Mizzima dia mitatitra fa ny National League for Democracy nanomana fivoriana tahaka ny mahazatra isan-talata hiresadresaka momba ny toe-draharaha politika.
“Nilaza ny vavolombelona nanatrika ity fivoriana ity fa nidaroka ireo mpanao fihetsiketsehana ry zalahy arynitondra azy ireo any amin'ny toerana tsy fantatra.”
Nieritreritra tokoa ve ny mpitandro ny filaminana fa hiteraka korontana na tsy fandriampahalemana eto amin’ny firenena ireo mpanao fihetsiketsehana sivy nirotsaka teny andalambe ireo ? Tsy atao mahagaga loatra raha tsikaritray fa Betsaka ny teratany Biormezy no samborina na dia tsy miditra amin'ny sehatra politika. Tadidio ireo tra-boina nosamborina noho ny fitarainana nataominy satria nahatsoaro mijalyizy ireo?
Tantaran'ny Myanmar (Birmania) farany
21 Jolay 2021Azia Atsinanana
07 Jolay 2021Azia Atsinanana
Mitolona amin'ny fanenjehana noho ny fanaovana tatitra momba ny fanonganam-panjakana ny mpanao gazety ao Myanmar